M/weynaha iyo R/wasaaraha Soomaaliya oo mawqif midaysan ka qaatay soo galitaanka ciidamada Kenya. – Radio Daljir
M/weynaha iyo R/wasaaraha Soomaaliya oo mawqif midaysan ka qaatay soo galitaanka ciidamada Kenya.
M/weynaha iyo R/wasaaraha Soomaaliya Sh. Shariif Sh. Axmed iyo C/wali Maxmed Cali ayaa isku raacay in ciidamada dalka Kenya ay si khaldan u soo galeen gudaha dalka Soomaliya, ka dib markii dawladda Kenya ay si khaldan u fahan tahay heshiis ay dhawaan labada dhinac kale sixiixdeen sida lagu sheegay war-saxaafadeed ay Mweynaha iyo R/wasaaruhu si wada jir ah galabta (Arbaca) uga soo saareen Muqdisho.
Labada mas?uul oo si wada jir ah shir jaraa?id ugu qabtay xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in heshiiskii labada dawladood ay kale sixiixdeen uu qorayey in Kenya ay taageerto ciidamada Soomaliya, balse aysan habayaraatee meesha ku jirin in ciidankeedu uu soo galo dalka Soomaaliya.
M/weyne Shariif ayaa sheegay inuu arrintaasi u saaray guddi uu hoggaaminayo R/wasaare Gaas, kuwaas oo arrinta soo dhiraandhirin doona.
Hadalka labada mas?uul ayaa imaanaya iyadoo ay soo baxayeen warar sheegaya in M/weynaha iyo R/wasaaruhu ay ku kala aragti duwanyihiin soo galitaanka ciidamada Kenya ee dalka Soomaliya.